Ny politika momba ny tsiambaratelo dia namboarina tamim-pitandremana ho an'ireo izay maniry hahafantatra ny fomba fampiasan'izy ireo ny "Fampahalalana manokana" amin'ny Internet. Ny mombamomba anao manokana dia ampiasaina hamantarana, hifandraisana, hitadiavana na hamantarana ilay olona voakasik'ity toe-javatra ity.
Azafady mba vakio ny politikanay momba ny tsiambaratelo hahafantarana ny fomba fanangonana angon-drakitra, ny fampiasana azy, ny fiarovana ary ny fikirakiranay araka ny tranokalanay.
Fampahalalana manokana noangoninay nandritra ny fitsidihan'ny bilaogy na tranokala
Rehefa feno ny fisoratana anarana sy ny fakan-kevitra dia manangona ireto fampahalalana manaraka ireto izahay: Anaran'ny mpitsidika, Adiresy mailaka, nomeraon-telefaona (azo avela), ary antsipiriany hafa miankina amin'ny serivisy nifanarahana.
Ahoana no fanangonana vaovao?
Manangona ny mombamomba ny mpitsidika izahay mandritra ny famenoana ny fikajiana, Live Chat, na amin'ny fisoratana anarana amin'ny tranokalanay.
Ahoana no fampiasantsika ireo fampahalalana nangonina?
Azontsika atao ny mampiasa ny fampahalalana nangonina tamin'ireto fomba manaraka ireto:
Ataovy manokana ny traikefanao sy hanomezana ny karazan-atiny sy vokatra tianao na mety ho tianao amin'ny ho avy.
Omeo serivisy tsara kokoa ho valin'ny fangatahanao na ny fangatahanao.
Hanodinana ny fifanakalozana.
Ho an'ny naoty sy hevitra momba ny serivisy na vokatra atolotray.
Manara-maso alohan'ny fifanoratana (chat mivantana, mailaka, na fanontanina an-tariby)
Ahoana no miaro ny vaovao?
Tsy mampiasa scanner momba ny faharefoana sy / na fitiliana amin'ny fenitra PCI izahay.
Manome lahatsoratra sy fampahalalana fotsiny izahay fa tsy mangataka nomerao amin'ny carte de crédit velively.
Ny mombamomba anao manokana nozarainao dia ao ambadiky ny tamba-jotra voaro ary ny olona manana ny angon-drakitra manokana no mahazo miditra. Takiana aminao ny hitahirizantsika ny tsiambaratelo momba ny angon-drakitra nangoninao. Ary koa, ny fampahalalana saro-pady omenao dia voafafa amin'ny alàlan'ny SSL (Secure Socket Layer).
Izahay dia mandray ny fepetra rehetra isaky ny miditra, mandefa, miditra amin'ny fampahalalana rehetra mba hiantohana ny filaminana azo antoka.
Ny raharaham-barotra rehetra dia atao amin'ny mpamatsy varavarana ary tsy voarakitra na ambenana amin'ny seriverantsika.
Ny fandoavam-bola rehetra dia tanterahina amin'ny alàlan'ny vavahady fandoavam-bola ary tsy afaka manao izany na mikasa ny hitahiry ireo angona amin'ny serveranay izahay.
Mampiasa 'cookies' ve isika?
Mangataka alalana aminao izahay alohan'ny hanangonana cookies. Azonao atao ny misafidy na hanaiky na hamono ireo cookies rehetra.
Mangataka cookies izahay hanomezana traikefa manokana. Amin'ny famonoana ny cookies dia mety tsy mandeha ny sasany amin'ireo fiasa ao amin'ilay tranonkala fa azonao atao ihany ny mametraka baiko.
Izahay dia tsy mivarotra, mivarotra, na mamindra na iza na iza amin'ny antoko fahatelo raha tsy hoe takian'ny serivisy nifanarahana izany.
Rohy mankany amin'ny antoko fahatelo
Tsy manolotra karazana tolotra na serivisy an'ny antoko fahatelo izahay.
Ny fepetra takiana amin'ny dokam-barotra amin'ny Google dia azo fintinin'ny Fitsipika momba ny doka amin'ny Google. Napetraka mba hanomezana traikefa tsara ho an'ireo mpampiasa izy ireo. Zahao eto.
Nanatanteraka izao manaraka izao izahay:
Remarketing amin'ny Google AdSense
Asehoy ny tatitra momba ny famoaham-peo Google Show Network
Demografika sy Tatitra momba ny Tatitra
Izahay miaraka amin'ireo mpivarotra avy amin'ny antoko fahatelo, toa ny Google dia mampiasa cookies an'ny antoko voalohany (toy ny cookies Google Analytics) ary ny cookies an'ny antoko fahatelo (toy ny cookie DoubleClick) na ireo famantarana ny antoko fahatelo hafa miaraka hanangonana angona momba ny fifandraisan'ny mpampiasa amin'ny doka ny fahatsapana sy ny asan'ny serivisy doka hafa satria mifandraika amin'ny tranokalanay.
Izahay miaraka amin'ireo mpivarotra ankolafy fahatelo dia tsy mampiasa afa-tsy cookies voalohany (ho an'ny analytics) sy cookies an'ny antoko fahatelo (DoubleClick Cookie) na mpanondro antoko fahatelo hafa hanangonana tahirin-kevitra ho an'ny doka sy asa hafa mifandraika amin'ny tranonkalantsika.
Ny rohy Politikanay momba ny tsiambaratelo dia misy ny teny hoe 'Tsiambaratelo' ary hita mora foana amin'ny pejy etsy ambony.
Ireo mpampiasa dia hahazo fampandrenesana momba ny fanovana ny politikany:
Afaka manova ny mombamomba azy ireo mpampiasa:
Amin'ny alàlan'ny mailaka anay
Manangona ny adiresy mailakao aminay izahay:
Mandefa fampahalalana, valin'ny fanontaniana, ary / na fangatahana na fanontaniana hafa.
Fanodinana ny baiko, fandefasana vaovao ary fanavaozana miaraka amin'ny baiko mifandraika.
Mampiasa azy io koa izahay handefasana fampahalalana fanampiny mifandraika amin'ny serivisy nifanarahana.
Amidio ny serivisy farany omenay sy ny tolotra azonay ho an'ny mpanjifanay taorian'ny nisehoan'ny fifampiraharahana voalohany.
Raha sanatria ka te-hiala amin'ny mailaka ho avy ianao dia andefaso mailaka izahay info@aplusglobalecommerce.com ary hesorinay tsy ho voatanisa intsony ianao.
Raha misy ny fanontaniana momba an'ity politika momba ny fiainana manokana ity dia azonao atao ny mifandray aminay amin'ny alàlan'ny fampahalalana etsy ambany.